ဒါက LEGO လား Marvel ပိုတန်ဖိုးရှိသော minifigure?
04 / 09 / 2021 05 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 248 Views စာ0မှတ်ချက် 76007 Iron Man: Malibu Mansion တိုက်ခိုက်မှု, 76008 Iron Man vs. Mandarin: Ultimate Showdown, စျေးဝယ်, အုတ်ခဲ, သံမဏိလူသား, Iron Man 3, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, အလယ်တန်းစျေးကွက်, Shang-Chi, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, Mandarin, Trevor Slattery
Shang-Chi နှင့် Legend of the Ten Rings တို့ပြန်လာပြီဟုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် Marvel အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်သောသူတစ် ဦး အပါအ ၀ င်ဇာတ်ကောင်များ Lego မင်္ဂလာပါ။
အသစ်အတွက် spoilers များနောက်ကလိုက်လာမည်ကိုသတိပြုပါ Marvel ပရောဂျက်တွင်ပါ ၀ င်သောဇာတ်ကောင်များ၏အသေးစိတ်များအပါအ ၀ င်ရုပ်ရှင်
p အဖြစ်art ရုပ်ရှင်သစ်၏ Shang-Chi သည်ဆယ်ကွင်းနှင့်ခေါင်းဆောင်မန်ဒရင်းတို့နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ ဒီနာမည်ကိုသိပြီးသားသူတွေနဲ့ရင်းနှီးနိုင်တယ် Marvel Cinematic Universe သည် Iron Man3တွင်ဆန့်ကျင်ဘက်ခေါင်းစဉ်အဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
76007 Iron Man: Malibu Mansion Attack နှင့် 76008 Iron Man vs. The Mandarin: Ultimate Showdown တို့တွင် minifigure တစ်ခုကိုရရှိခဲ့သောထိုဇာတ်ကောင်၏ပုံစံကို Trevor Slattery ကသရုပ်ဖော်ခဲ့သည်။ ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးခဲ့သောမင်းသားသည် Shang-Chi နှင့် Legend of the Ten Rings ၌ပြန်လာသည်။
သူ၏ရုပ်ရည်သွင်ပြင်သည်သူ၏ရုပ်ရှင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများအကြားတွင်တူညီနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ရုပ်ရှင်သစ်ကိုကြည့်ဖူးသူများသည် Shang-Chi သရုပ်ဆောင်ကိုပြီးမြောက်ရန်အဟောင်းရုပ်သေးရုပ်ကိုလက်ဖြင့်ယူလိုပေမည်။ Lego ပုံစံ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ Iron Man3အစုံများသည်အငြိမ်းစားယူခဲ့ချိန် မှစ၍ minifigure ကိုလက်ထဲရောက်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းသည်ဒုတိယစျေးကွက်မှတဆင့်ဖြစ်သည်။
လောလောဆယ်တွင် Trevor Slattery ၏ Mandarin ၏ minifigure သည် BrickLink တွင်ရနိုင်သည် ပေါင် ၁၅ ၀ န်းကျင်၊ အငူနှင့်အနည်းငယ်ပိုသည်မရ။ ဒါပေမယ့်ရုပ်ရှင်ကိုလူတွေပိုကြည့်ပြီးဇာတ်ကောင်ပြန်ရောက်လာတာကိုသတိထားမိရင်အဲဒါကပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။
Shang-Chi တီးဝိုင်း၏ကျန်အပိုင်းများကိုပြီးမြောက်စေရန်နောက်ဆုံး MCU ပရောဂျက်အတွက်တရားဝင်အတွဲနှစ်တွဲကိုယခုရနိုင်သည် 76177 ရှေးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲ နှင့် 76176 ဆယ်ပါးလက်စွပ်မှလွတ်မြောက်.
← ယခင် LEGO ပရိုမိုးရှင်းအစုတစ်ခုကိုယခု ၀ ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်
LEGO အဟောင်းတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ် Marvel ကျီစားရင်ဘာဖြစ်မလဲ ... ? ဇာတ်ကောင်? →